Kiniiniga Multivitamin QODOBADA: Vitamin A 64 000 IU Vitamin D3 64 IL Vitamin E 144 IU Vitamin B1 5.6 mg Vitamin K3 4 mg V itamin C 72 mg Folic Acid 4 mg biotin 75 uglin Cholin Chloride 150 mg Selenium 0.2 mg Fer 80 mg copper 2 mg Zinc 24 mg Manganese 8 mg Calcium 9% fosfooras 7% Kuwa leh qs AMADARADA: Hagaajinta waxqabadka koritaanka iyo tufnaanta. Lacalla ...
Kiniiniga Oxytetracycline Tablet 100mg
Kiniiniga Oxytetracycline 100mg Halabuurka: Kiniin kastaa wuxuu ka kooban yahay: Oxytetracycline hydrochloride 100mg Tilmaamaha: Booskan waxaa lagu talinayaa maamul afka ah si loo xakameeyo loona daaweeyo cudurada soo socda ee ku dhaca hilibka lo'da iyo caanaha xoolaha oo ay sababaan unugyada xasaasiga u ah oxytetracycline: Bakteeriyada bakteeriyada keenta Salmonella typhimurium iyo Escherichia coli (colibacillosis) iyo bakteeriyada oof wareenka (dhoofinta xummadda qandhadda, pasteurellosis) oo ay keento Pasteurella multocida. Loogu adeegsado ...
Kiniiniyada Tricabendazole 900mg Tilmaamo-daaweyn: Triclabendazole waa weelka dheecaanka dheecaanka leh ee wax ku oolka ah ee daaweynta iyo xakameynta xanuunka fascioliasis ee daran iyo dabadheeraada ee lo'da. Wax ku oolnimada ugu wanaagsan waxaa lagu muujiyaa ficilkeeda halista ah ee ku saabsan da'da hore, aan qaan gaarin iyo heerarka dadka waaweyn ee fasciola hepatica iyo Fgigantica. Qiyaasta & Maamulka: Sida dawooyinka kale ee loo yaqaan 'anthelmintics' bolus waxaa lagu maamuli karaa OS kasta iyadoo gacanta lagu garaacayo qormo ama la burburiyo oo lagu qasay biyo iyo biyo. Qiyaasta lagu taliyey waa 12 ...
Halabuurka: Tetramisole hcl ....... Fasalka Daawada: Tetramisole hcl bolus 600mg waa mid ballaaran oo daawayn xoog leh. Waxay gebi ahaanba ka hortagtaa ku dul nooleyaasha kooxda nematodes ee goorrooyinka caloosha iyo xiidmaha. sidoo kale waa mid si aad ah waxtar ugu leh sambabbada waaweyn ee hab-dhiska neef-mareenka, dixirmada indhaha iyo dhuuban-biyoodka. Tilmaamaha: Tetramisole hcl bolus 600mg waa annaga ...
Halabuurka: Oxyclozanide ……………………… 1400mg Tetramisole hydrochloride …… 2000mg Kuwa qaaliga ah qs …………………… .1 bolus. Tilmaanta: Oxyclozanide waa xarun isku-darka bisphenolic oo ka hortagaysa ololka beerka qaangaarka ee lo'da. kelyaha iyo xiidmaha waxaana loo qoraa sidii glucuronide firfircoon. Oxyclozanide waa unug ka mid ah oksidativ ...
Halabuurka: Oxyclozanide ……………………… 450mg Tetramisole hydrochloride ……. Tilmaanta: Oxyclozanide waa isku-darka bisphenolic-ka firfircoon ee ka hortaga duufaanka beerka ee dadka waaweyn ee ido iyo riyaha. kelyaha iyo xiidmaha waxaana loo qoraa sidii glucuronide firfircoon. Ogsijiinka loo yaqaan 'oxygenclozanide' waa unug ka mid ah oxidati ...
Halabuurka: bolus kasta wuxuu ka kooban yahay: Levamisole hcl …… 300mg Sharaxaad: Levamisole waa daawo-baaxad weyn oo daaweyn leh waxayna wax ku ool u tahay caabuqyada nematode ee soosocda ee lo'da: Gooryaanka caloosha: haemonchus, ostertagia, trichostrongylus.intestinal Gooryaanka: trichostrongylus, coo cos, nematodirus, bunostomum, oesophagostomum, chabertia, lungworms: dictyocaulus. Qiyaasta iyo Maamulka ...
Kiniiniyada Levamisole iyo Oxyclozanide Tablet
Halabuurka Oxyclozanide 1400 mg Levamisole hcl 1000mg Sharaxaad: Wareega wareega, Gooryaanka sambabka, aad ayuu waxtar u leeyahay ka hortagga ifilada dadka waaweyn iyo ukunta dhalada leh iyo Larva, waxay aamin ku tahay xayawaanka uurka leh. Qiyaasta: 1 bolus - ilaa 200 kg / bw 2 bolus - illaa 400 kg / bw qaadashada -3 maalmood caano. -28 maalmood hilib. Kaydinta: Ku kaydi meel qabow, qalalan iyo mugdi ah oo ka hooseysa 30 ° c. Xirmidda: 5 bolus / khariidad 10 khariidad / sanduuq Ka fog taabashada carruurta, iyo meesha qallalan, ka fogow iftiinka qorraxda iyo iftiinka
Kiniiniga Fenbendazole 750mg
Halabuurka: Fenbendazole …………… 750 mg Kuwa wax soo iibsaday qs ………… 1 Tusaalayaasha: Fenbendazole waa muuqaal balaaran oo benzimidazole anthelmintic loo isticmaalay oo looga soo horjeedo sunta caloosha. , Hardyles iyo fortyloides waxaana lagu maamuli karaa faraska, dameerka, baqlaha, lo'da. Qiyaasta iyo Maamulka: Guud ahaan fenben 750 bolus waa la ...
Kiniiniga Fenbendazole 250mg
Halabuurka: Fenbendazole …………… 250 mg Kuwa la soo qaatay qs ………… 1 bolus. Tilmaamaha: Fenbendazole waa muuqaal ballaadhan oo benzimidazole anthelmintic ah oo loo adeegsado ka hortagga caloosha iyo caloosha. Qiyaasta iyo Maamulka: Guud ahaan fenben 250 bolus waxaa la siiyaa isleeg ...
Kiniiniga Albendazole 2500mg
Halabuurka: Albendazole …………… 2500 mg Kuwa soo haystay qs ………… 1 bolus. Tilmaamaha: Ka-hortagga iyo daaweynta caloosha iyo kaadi-mareenka xoogga ku dhaca, marinka dhiigga, fasakooliyeyaasha iyo fasakoolo-diidka. albendazole 2500 waa ovicidal iyo larvicidal. waxay si gaar ah ugu firfircoon tahay dirxiga xiran iyo habdhiska dheefshiidka. Ka hortagga uurka: xasaasiyad u leh albendazole ama wax kasta oo ka kooban alben2500. Qiyaasta iyo Maamulka: Ora ...
Kiniiniga Albendazole 600mg
Halabuurka: Albendazole …………… 600 mg Kuwa aan qaangaarin qs ………… 1 bolus. Tilmaamaha: Ka-hortagga iyo daaweynta caloosha iyo kaadi-mareenka xoogga ku dhaca, marinka dhiigga, fasakooliyeyaasha iyo fasakoolo-diidka. albendazole 600 waa ovicidal iyo larvicidal. waxay si gaar ah ugu firfircoon tahay dirxiga xiran iyo habdhiska dheefshiidka. Ka hortagga uurka: Xasaasiyad u leh albendazole ama wax kasta oo ka kooban alben600 Qiyaasta iyo Maamulka: Af ahaan: S ...